Matahotra ny handefa ny ankizy hiverina an-tsekoly ao anatin’ny ady mitam-piadiana ireo ray aman-dreny Kameroney · Global Voices teny Malagasy
'Aleo zaza tsy mahay taratasy toy izay zaza maty?'
Voadika ny 18 Septambra 2019 5:37 GMT
Efitrano fianarana foana any Kamerona , 17 Jona 2007, avy amin'ny Pixabay CC BY 2.0.
Nandritra ny fahavaratra, nanatontosa fanentanana faobe ireo manampahefana any Kamerona mba hanokafana indray ireo sekoly any amin'ny faritra avaratra andrefana sy atsimo andrefan'ny firenena izay tratran'ny krizy, raha mbola mihahenjana ny toe-draharaha eo amin'ny governemanta Frankôfôna sy ny mpisintaka Anglôfôna.
Nakatona nanomboka ny taona 2016 ny ankamaroan'ny sekoly, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra raha nanomboka ny hetsika hanangana fanjakana mpanohitra antsoina hoe Ambazonia ry zareo Anglôfôna mpisintaka avy amin'ny faritra mampiasa ny teny frantsay maro an'isa ao amin'ny firenena. Niantso ny fanaovana ankivy ny sekoly izy ireo ho ampahany amin'ny ezaka ataon'izy ireo hanoherana ny tsy rariny ao amin'ny rafi-pampianarana izay tantanann'ny Frankôfôna, araka ny The Guardian .
Nilaza ny Kameroney Anglôfôna fa tsy mitsahatra manavakavaka ny faritra misy azy ireo, ny fiteniny ary ny kolontsainy ny governemanta tarihin'ny frankôfôna.
Nanamafy ireo Anglôfôna mpikomy fa hisy “tanàna maty” manomboka ny 2 Septambra izay daty hanombohan'ny taom-pianarana vaovao, raha toa ka hikasa hisokatra indray ny sekoly ka hitohy noho izany ny fanaovan'izy ireo ankivy an'i Kamerona miteny frantsay. Mitranga izany taorian'ny fampidirana am-ponja mandrapahafaty ilay mpitarika mpisintaka Sisiku Julius Ayuk Tabe sy ny olona miisa sivy hafa any amin'ny fonjan'i Kondengui, renivohitr'i Kamerona, Yaoundé.
Saingy nanome toky ny vahoaka amin'ny famerenana indray ny fidirana an-tsekoly am-pilaminana sy mahomby ny governora ao amin'ny faritra atsimo andrefan'i Kamerona, Bernard Okalia Bilia.
“Efa napetraka ny fepetra fiarovana. Azontsika atao ny maka ny ohatra tamin'ny herintaona; nahavita nikarakara fanadinana tamin'ity faritra ity isika ary maro ireo kandidà nahomby no noarahabaina. Fantatrareo fa afaka miaro anareo ny olona tsirairay ao amin'ity faritra ity; tsy azo antoka ny fiarovana raha tsy miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ianareo,” hoy Bilia niresaka tamin'ny Global Voices tamin'ny antsafa ny volana Aogositra teo nandritra ny fanentanana famerenana hampiditra an-tsekoly indray tany Buea, Kamerona.
Nanamaivana ny ady mitam-piadiana nitovy tamin'izany ihany koa ny mpiara-miasa amin'i Bilia any amin'ny faritra avaratra-andrefana, Adolf Lele L'Afrique. “Efa noraisina ny fepetra fiarovana, ka tokony handeha any an-tsekoly ny ankizy amin'ny Alatsinainy,” hoy L'Afrique tamin'ny fampitam-baovao-panjakana Cameroon Radio TV (CRTV).
Na dia teo aza ny toky nomen'ny governemanta dia efa saika ho 80 isan-jaton'ny sekoly tany amin'ny faritra nahitana korontana no nikatona vokatry ny fandrahonana sy ny fanafihan'ny mpioko. Nitatitra ny Sampan-draharahan'ny UNICEF ao amin'ny Firenena Mikambana Mikarakara ny Reny sy ny Zaza fa sekoly maherin'ny 4.400 no nakatona ka tsy nahafahan'ny ankizy maherin'ny 600.000 nianatra tany Kamerona.
Voalaza fa namono sy naka an-keriny ireo mpampianatra tany amin'ny faritra Anglisy ireo mpiady mpisintaka ho ampahany tamin'ny hetsik'izy ireo mba hanohizana ny fanakatonana ny sekoly sy ho fanamafisana ny hetsik'izy ireo.
Nilaza tamin'ny CRTV tamin'ny 28 Aogositra i Hannah Etonde Mbua, solontena avy any atsimo andrefana ho an'ny fampianarana ambaratonga faharoa:
Maro tamin'ireo mpampianatra anay no nalaina an-keriny ary nentina tany anaty ala; tsy nafahana izy ireo raha tsy voaloa ny vidin'ny takalon'aina. Betsaka tamin'izy ireo no voatifitra tany amin'ny biraony, ny sasany maty ary ny sasany kosa notapahan-tanana na tongotra. Matahotra mafy ireo mpianatra sy ireo mpiasa noho izany. Saingy nahavita niantso ankizy vitsivitsy ho tonga tany am-pianarana ihany izahay noho ny minisiteran'ny fampianarana.
Nanohy ny fanentanana ho an'ny famerenana ny fisokafan'ny sekoly indray manerana ny firenena tamin'ny fandaharan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary ny tambajotra sosialy ny fiarahamonim-pirenena sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta. Nanome ohatra ny Praiminisitra Anglôfôna Joseph Dion Ngute tamin'ny volana Mey raha nitsidika ireo faritra niharan'ny krizy izy ary nanao kabary tao Buea, izay nampitaina tamin'ny onjam-peo:
Praiminisitra aho ankehitriny satria nandefa ahy tany an-tsekoly ny raiko. Tsy marina ve izany? Tsy ho lasa Praiminisitra aho raha tsy nandefa ahy tany an-tsekoly ny raiko.
Nilaza ny Governora Bilia fa mbola vao eo an-dalam-panombohana amin'ny fianarana ny mponina ao amin'ny faritra misy azy:
Tapa-kevitra ny hanohy ny fampianarana [amin'ity volana Septambra ity] ny mponina iray manontolo ao amin'ny faritra atsimo andrefana… Tokony hajanona amin'izay ny telo taona nanaovana sorona ny taranaky ny zanatsika.
Saingy nampitandrina ny ray aman-dreny, matetika amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, mba tsy handefa ny zanany any am-pianarana, ireo Anglôfôna mpisintaka, izay mihevitra ny fanaovana ankivy ny sekoly ho fomba iray hanerena ny governemanta.
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Tapang Ivo Tanku, izay mipetraka any ivelany :
Bala betsaka no nafarana mba hiarovana ireo sivily [ao Ambazonia] satria mbola hanao ankivy ny sekoly izy ireo amin'ny herinandro hoavy. Raha sahy miady ny zon'izy hanao ankivy ianareo dia hisedra hery.
Nanontany momba ny fanokafana indray ny sekoly any amin'ny faritra izay nofaritan'ny mpisera Twitter Rebecca Enonchong ho “faritra miady” ireo mpisera aterineto nanana ahiahy:
Samy tiantsika mba hianatra avokoa ny zanatsika. Ny fanaovan'ny governemanta fanentanana ‘hiverina any an-tsekoly’ any amin'ny faritra mi ady no tena fihatsarambelatsihy izay mbola ahitana ny famonoana olona mitohy isan'andro ary izay tsy mbola voavaha ny olana fototry ny krizy ary niharatsy indrindra aza raha ny marina.
Nisioka i Derick Deci ho setrin'izany:
Rehefa nanao ny fanentanana fiverenana any an-tsekoly tamin'ny herinandro lasa teo, dia nihaona tamin'ity renim-pianakaviana ity aho izay nilaza tamiko (amin'ny fitenim-paritra) hoe “Aleoko kokoa manan-janaka tsy mahay mamaky teny sy manoratra toy izay maty zanaka”. Nahatonga ahy hahatsiaro ny zavatra nataoko izany fanambarana izany. Mila fandriampahalemana, fifankahazoana ary fifanakalozan-kevitra iraisana aloha izay vao miverina any an-tsekoly.
Iray tamin'ireo olona teo am-pisalasalana i Matanga Hans Hilary Hamza, raim-pianakaviana manan-janaka roa sady mpanabe izay naniry ny hisian'ny fifanakalozan-kevitra hamahana ny olana mba hahafahan'ireo zanany mianatra any an-dakilasy am-pilaminana.
Niresaka tamin'ny Global Voices tamin'ny faraparan'ny volana lasa teo i Hamza, nandritra ny Eid al-Adha raha nivory tao Buea ny Miozolomana miteny Anglisy miisa 100 hiantso ho amin'ny fandriampahalemana.
Hoy i Hamza tamin'ny Global Voices:
Miangavy ny roa tonta aho mba hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana. Tsy biby ny zanatsika, noho izany, mila mandeha mianatra izy ireo.